बुद्धभूमिमै उभिएर कमल थापाले किन दिए बुद्धधर्म अल्पमतमा पर्ने चेतावनी ? – Pahilo Page
बुद्धभूमिमै उभिएर कमल थापाले किन दिए बुद्धधर्म अल्पमतमा पर्ने चेतावनी ?
२२ फाल्गुन २०७५, बुधबार २१:०२ 1141 पटक हेरिएको
काठमाडौं, २२ फागुन । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले बुद्धको जन्मस्थल ऐतिहासिक लुम्बिनीमा बोल्दै नेपाल हिन्दूराष्ट्र नभएमा नेपालमै बुद्धधर्म अल्पमतमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्राको आठौं दिन रुपन्देहीको भैरहवामा विशाल जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
मोटरसाइकल र्याली र बृहत जनसहभागिताबीच भएको भैरहवा नगर परिक्रमापछि बोल्दै अध्यक्ष थापाले भने, ‘‘आज रुपन्देही आउँदा निकै उत्साहित र हर्षित भएको छु ।’’ अध्यक्ष थापाले हिन्दूराष्ट्र बनाउन भैरहवावासीको महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका रहने बताए । उनले आफूले सरकारसमक्ष २२ बुँदे ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका मागहरु पूरा नभए चैतको पहिलो हप्ताबाट देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
अध्यक्ष थापाले पहाडमा धर्म परिवर्तनको डढेलो लागिसकेको र बिस्तारै तराईमा पनि सल्किन थालेकाले सम्पूर्णलाई सचेत रहन आग्रह गरे । धर्म परिवर्तनको शिकार धेरैजसो सनातन धर्म बौद्ध र किराँत धर्म रहेको समेत उनको दावी थियो । ‘‘यदि यो क्रम नरोकिएमा बौद्ध र किराँत धर्म केही समयमै लोप हुनसक्नेछ । यस कुरामा मलाई अत्यन्तै चिन्ता लागिरहेको छ ।’’
आमसभामा राप्रपाका वरिष्ठ नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । राप्रपा नेता तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सभामा बोल्दै आफू लिम्बूको छोरो किराँत धर्म मान्ने तर नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्ने अभियानमा जोडतोडका साथ लागिपरेको बताए । नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनुमा गिरिजा, प्रचण्ड र माधव नेपाल मात्र दोषी नभएर तिनीहरुलाई भोट दिने हरेक नेपालीको हात पनि दोषी रहेको टिप्पणी उनको थियो ।
कार्यक्रममा अर्का नेता बुद्धिमान तामाङले आफूले बुद्ध धर्म मान्ने गरेको बताउँदै तर पनि नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्ने कुरामा लागिरहेको बताए । पार्टीका वरिष्ठ नेता दीपक बोहराले आफू रुपन्देहीको विकास र हकहितको निम्ति लागिपरेको र सदैव लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । राप्रपा एकताको लागि पूर्णरुपले लागिपरेको र अहिले एकता नभए पनि केही समयमा पार्टी एकता हुने जानकारी दिए ।
सम्पूर्ण ॐकार परिवारलाई आफ्नो धर्म, सँस्कृति जोगाउनको लागि एक ठाउँमा उभिन थापाले आग्रह गरेको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संघका महासचिव जनक फडेराले जानकारी दिए ।